Accueil > Gazetin'ny nosy > Rolly Mercia: Tra-tehaka nanely vaovao tsy marina
Rolly Mercia: Tra-tehaka nanely vaovao tsy marina
Mbola manodidina ny raharaham-pitantanana ny kaominin’i Mahajanga hatrany no vontoatin’ity lahatsoratra iray ity.
Raha tsiahivina moa dia tsy nahomby ny tetika maloton’ny fitondram-panjakana foibe tamin’ny nilalaovana an’ireo mpanolotsainan’ny tanàna any an-toerana hampitsahatra amin’ny asany an’Ingahy Ben’ny tanàna; Andriatomanga Mokhtar, ny zoma teo. Nampiasa volabe nividianana ny fanahin’ireo mpanolotsainan’ny tanàna ny avy eny an-dapan’Atsimondrano fa tsy nahomby e!
Iray tamin’ireo teboka azo ambara fa mavesatra nifotoran’ny antony nirosoan’ireo mpanolotsainan’ny tanàna hampitsaharana amin’ny asany an’i Mokhtar Andriatomanga, Ben’ny tanàna, ny hoe “nisy fiarakodia nomen’ny mpiara-miombona antoka avy any ivelany ho isan’ny fitaovana iasan’ny kaomina nefa nataon’Ingahy ben’ny tanàna ho amin’ny anarany”.
Raha ny sokajin’izany tranga ao amin’io teboka io izany aloha dia heloka sazian’ny fehezan-dalàna famaizana izany. Ny dikan’izany, raha ny marina sy raha ny lalànany, dia tsy iandrasana ny fampitsaharan’ny mpanolotsainan’ny tanàna amin’ny asany ny ben’ny tanàna izany vao azo karakaraina fa ny tsirairay, ny olom-pirenena tsotra, dia afaka mitondra ny raharaha eo anoloan’ny fampanoavana mitory ny ben’ny tanàna.
Tsy raharaha manodidina ny fitantanana ny kaomina toy ny hoe tsy fahombiazany na fitavozavozany na nisy fandaharan’asa tokony nataony nefa tsy vitany, sy ny toa izany, izy io, ka hoe “ny mpanolotsainan’ny tanàna no mandray fanapahan-kevitra aloha”. Raha nahazo ny maro an’isa tamin’io fampitsaharana amin’ny asany ny ben’ny tanànan’i Mahajanga io mantsy ireo mpanolotsaina “nivarotra fanahy” tamin’Atsimondrano dia ho nandray fepetra avy hatrany tamin’ny alalan’ny didim-pitondrana mampitsahatra amin’ny asany an’io ben’ny tanàna io ny fitondrana foibe.
Na izany na tsy izany, nibaribary teo anoloan’ny fivorian’ny mpanolotsainan’ny tanàna’i Mahajanga tamin’ny alalan’ny famaliana ny fangataham-panazavana nataon’izy ireo tamin’ingahy Ben’ny tanàna, ny tsy fahamarinam-pototr’ilay fihampangana hoe “nanodina ny fiaran’ny kaomina ho amin’ny anarany”.
Ny nahavariana anefa, ary tena nanaitra ny maro, dia ny fahasahian’Ingahy minisitry ny fifandraisana, Rahajason Harry Laurent, nanamafy an’io resaka fanodinkodinana ny fiaran’ny kaomina io raha nivahiny tao amin’ny Radio Antsiva izy ny alakamisy teo.
Marina ary ekena fa ny iray tamin’ireo teboka nikasan’ny mpanolotsainan’ny tanàna hikapana ny lohan’ny Ben’ny Tanàna Andriatomanga Moktar, io resaka fiarakodia hoe nahodiny io, saingy tsy tokony nanamafy izany Ingahy Minisitra Rolly Mercia ary tsy tokony ho nandray ho ohatra akory aza an’io raharaha iray io, raha tsy karazan’ny efa nahazo antoka fa nisy ilay tranga na ilay finiavana hanodina ilay fiara.
Mitovy tsy misy valaka amin’ny anatra na fanakianana koa ataon’Ingahy minisitra Rolly Mercia ny mpanao gazety amin’ny famoahana vaovao iray io, ka ilazany mandrakariva, amin’ny maha-manam-pahaizana ambony (professeur agrégé en journalisme d’investigation ????) azy, ny hoe “alohan’ny hamoahana vaovao dia hamarino tsara aloha na iza na iza niteny izany mba tsy hahavoarohirohy anao mpanao gazety ho mamoaka vaovao tsy marim-pototra”. Lasa manamafy na fitaovana anelezana ilay tenin’olona milaza vaovao tsy marina mantsy ianao mpanao gazety, hoy izy matetika.
Ka izao fitondran-dRahajason Harry Laurent ity resaka ity tao amin’ny Radio Antsiva izao dia midika koa fa misy finiavana hanely vaovao tsy marim-pototra teo aminy. Io avoakanay an-tsary io mantsy izao ny porofo nandresen’ny Ben’ny tanàna’i Mahajanga lahatra an’ireo mpanolotsainan’ny tanàna fa tsy marina ny fihampangana azy momba io fiara io.
Ka eto izany dia azo afatotra andraikitra amin’izay famoahany na fanamafisany ny famoahana vaovao tsy marina izay ny minisitra Rahajason Harry Laurent Rolly Mercia.
Tena azo tarafina amin’ireny fanamafisany famoahana vaovao tsy marim-pototra ireny mantsy ny finiavana tao an-tsain’ny fitondrana foibe ho fanoitran’ny fikapana ny lohan’ny Ben’ny tanànan’i Mahajanga. Raha toa mantsy ka tsy tao anatin’ny fitondrana foibe ny eritreritra hamely an’ity ben’ny tanàna ity dia tsy ho nandray ohatra momba an’io resaka fiara io ny minisitra Rahajason Harry Laurent Rolly Mercia.
Dia manara-maso ny ho fahatsiarovany tena ny maro satria hain’ingahy Minisitra Rolly Mercia aoka izany ny mitsikera na mamely ny hafa fa raha izy kosa no ahitana itony fihetsika na fitenenana imasom-bahoaka mifototra amin’ny zavatra tsy marina itony, mba inona no hataony, sa miandry inona izy? Sa inona no azon’ny vahoaka hatao aminy?